dailynews.blaogy | Rohy
Campus pour Christ: sendra mba hitako izy ity ary tena ilaina fantatra
Tom Brown ministries: Namaky lahatsoratra sy nihaino toriteny vitsivitsy aho ary hitako fa manampy @ fiainana kristiana izany.
Fanilo Radio: Fanilo Radio, misy hira malagasy, tiako ihany koa ny mihaino ny mana isanandro
Myles Munroe: Mahafinaritra ahy fotsiny ny fomba fanazavany zavatra.
Joel Osteen: manana fanomezam pahasoavana manokana izy @ fampaherezana izay reraka. Tsara henoina izy rehefa mahita iny eo @ fiainaan fa negatifs daholo ny zavatra rehetra.
Billy Graham: Lehilahy nitondra olona maro be tao @Tompo, tsy hoe nanaraka fiangonana fa nanaraka ny Tompo ary manana ny maha izy azy tokoa.
John Francis: Tsy hitako izay lazaina azy, lehilahy maherin Atra..... ny fahenoana ny toriteniny dia tena mampahery be mihitsy... i love him i love him i love him...
Mike Murdock: Dr Mike Murdock dia manana fanomezampahasoavana manokana amin ny fampianarana ny fahendren Atra. Manakarena tokoa izy @ fahendrena ary mapianatra zavatra marobe @ fiainana andavanandro.
Tim lahaye: Mpanopmpon Atra manana fanomezampahasoavana ihany koa amin ny fampianarana indrindra ny fanazavana ny bokyn' apokalipsy. ny kristiana rehetra dia tokony hamaky io boky io ary hianatra izany. Niara nanoratra an ireo boky ireo izy niaraka t@ Jerry B. jenkins. Tena a conseiller ny famakiana ireo boky ireo. Raha te hahafanatra bebe kokoa ny momba ny boky momba ny apokalipsy izany dia tsara ny mamaky ireo boky left behind series, izay misy boky 12 raha tsy diso aho nosoratany. Tim Lahaye sy ny mpanompon Atra jerry B. jenkins no nanoratra izany.
Derek Prince: Derek Prince dia mpanompon Atra manan fanomezampahasoavana manokana amin ny fampianarana. mamelombelon aina sy manakarena fanazavana ireo boky izay soratany. Anisan ny tiako indrindra raha hijery ny literatiora kristiana. Raha te hitombo haingana @ finoana ihany koa dia tsara raha mamaky ny bokiny. Efa nodimandry.
Christ for all Nations, Rheinhard Bonke: Rheinard Bonke dia mpanompon Atra iray ihany koa manana fanomezampahasoavana manao fahagagana maro . Teratany allemand mipetraka eto usa izy. Efa tany Mkara nanao asan Atra tany. Lehilahy mahery ihany koa izy amin ny fanaovana ny asa fanompoana ny Tompo ary tsy manandratra hafa tsy i Jesoa Kristy fa tsy anarana hafa ankoatra Azy na ny tenany.
Benny Hinn: Mpanompon Atra manana nomen Atra fanomezampahasoavana manokana ho an ny fanasitranana i Pr Benny Hinn. Mandeha eran izao tontolo izao izy mitory ny filazantsaran I Jesoa Kristy ary ihany koa manasitrana. Betsaka tsy tambo isaina ny sitrana @ cancer, fahajambana, moana, marenina, marary tongotra, ..aretina maro samihafa mihitsy mandritra ny famangiana izay ataony. Ny fanomezampahasoavana izay ataony dia Jesoa Kristy no andrandrainy fa tsy ny tenany na dia ampiasain Atra aza izy @ fanasitranana maro dia maro.